Kuonda - Cmoapi
Unogona kuita Kurema kurasikirwa mapiritsi kutenga pazvitoro zvepamhepo. Kana chinangwa chako kuri kurasikirwa nemapaundi ekuwedzera nekuda kwekufutisa, unogona kutarisa Kurema mapiritsi mapiritsi list Orlistat / Cetilistat - kutengeswa online. Nekudaro, iwe ungangoda mushonga semhedzisiro yemitemo yakaoma neDFA.
Kana iwe uchitsvaga mapiritsi ekuremerwa uremu, unofanirwa kutarisa neCMOAPI kuti uwane unovhenekerwa zvigadzirwa zvakachena. Makomputa edu akawana vimbiso yemhando yepamusoro.
Kana pasina mafuta mune kumwe kwekudya kwako, kana kana ukarasikirwa nechikafu, hapana chikonzero chekuti iwe utore muyero we orlistat.
Mangani orlistat yandinotora zuva?
Orlistat inowanzo kutorwa katatu pazuva uye yega yega yekudya ine mamwe mafuta (hapana anopfuura 3% emakoriori echikafu icho). Unogona kutora mushonga pamwe nekudya kwako kana kusvika pa30 awa mushure mekudya.
Unogona here kuburitsa mafuta kunze kana uchidya Orlistat?
Orlistat inhibits basa re lipase. Paunotora mushonga pamwe nekudya, angangoita makumi maviri neshanu muzana emafuta aunodya haana kutyorwa uye anobviswa kuburikidza nekufamba kwematumbu.
Orlistat ine mhedzisiro here?
Kazhinji zvinotaurwa mhedzisiro ye orlistat inosanganisira: ura kukurumidzira, kugara uchiita ura, kubuda kwemafuta, oile rectal leakage, steatorrhea, uye flatulence nekubuda.
Unogona here kutora 2 orlistat kamwechete?
Orlistat inoshanda chete kana paine mafuta mune zvaunodya, saka kana ukapotsa kudya kana ukadya chikafu chisina mafuta saka usatora iyo orlistat. Kana iwe ukakanganwa kutora dose, usanetseka; ingotora kapuleti nechikafu chako chinotevera senguva dzose. Usatore madosi maviri pamwechete kuti uwane muyero wakakanganikwa.
Ndeipi iri nani orlistat kana Xenical?
Musiyano uripo pakati peorlistat neXenical ndeyekuti orlistat ndiyo generic vhezheni yemushonga, nepo Xenical ichitemerwa zita. Izvi zvinoreva kuti Xenical inodhura kupfuura Orlistat uye zvirinani kuzivikanwa setafura yekurema. Xenical inofanirwa kutorwa nenzira yakafanana neiyo orlistat.
Unogona here kunwa pa orlistat?
Orlistat haidyidzane nedoro, saka zvakachengeteka kunwa doro uchitora Orlistat. Zvisinei, doro rine macalorie akawanda. Nekudaro, kunwa doro uchitora Orlistat kunogona kukanganisa rwendo rwako rwekurema. Kuti uwane mamwe mazano ekuti Orlistat ibudirire kushandisa yedu Orlistat kudya
Ino orlistat inokanganisa kubereka here?
Muboka reorlistat, kusimudzira kwakakosha kwakaonekwa muhuwandu hwepombi pakupera kwemwedzi mitatu. Conception mitengo yaive 3% uye 40% uye 16.7% mune orlistat, metformin boka uye rinodzora boka zvakateerana (P - 3.3). Kurera huremu kwakawanikwa kuve kwakanakisa kufungidzira kweovulation nekunzwa nekunzwa kwakanaka.
Ini ndinogona kutora orlistat kamwe pazuva?
Iyo yakajairwa dosi ndiyo imwe kapsule - 120 mg, katatu pazuva nechingwa chega chega. Nekudaro, iwe haufanire kutora rimwe kana pasina mafuta mukudya kana kana ukapotsa kudya.
Alli yakabatanidzwa nekukuvara kwakakomba kwechiropa muzviitiko zvisingawanzoitika, asi zvakanyanyisa kuitika kune avo vanotora mushonga-simba simba (Xenical). Regedza kutora Alli uye udane chiremba wako nekukasira kana iwe ukagadzira chero cheichi chinogoneka chiratidzo chekukuvara kwechiropa.
Ino orlistat inosimudza BP?
Orlistat inosimudzira kiriniki ine huremu hwekuremerwa uremu iyo inosanganisirwa nekuderedzwa kwakakosha muropa uye kurova kwemoyo, uye nekudaro inogona kuita basa mukutungamira kwehypertension mune vakawandisa uye vakafuta varwere.
Inogona here orlistat kukonzera matambudziko eitsvo?
Orlistat inhibitor yegastric uye pancreatic lipase ine yakaratidza kushanda mukuwedzera uye kuchengetedza kwehuremu. Kunyangwe iko kushandiswa kwaro kwakaganhurirwa neanonetsa asi akaipisisa gastrointestinal mhedzisiro, kwave kuchangobva kuve kwakabatana neakanyanya itsvo kukuvara (AKI).
Orlistat muropa here?
Orlistat ipancreatic lipase inhibitor uye inodzivirira kunwa kwemafuta munzira yekugaya. Nekuti haina kukanganisa iyo yepakati tsinga system, orlistat inogona kunge isingaite zvinodhaka.
Ko Orlistat FDA inogamuchirwa?
Xenical (orlistat 120mg) yakagamuchirwa sechigadzirwa chemushonga neDFA muna1999 yekufutisa manejimendi pamwe chete neakaderera caloric chikafu, uye kudzikisa njodzi yekuwanazve huremu mushure mekurema kwekutanga uremu.
Iwe unotora sei orlistat 120 mg?
Iyo yakajairwa dhijitari yeOrlistat imwe ye120 mg kapsule yakatorwa nechimwe nechimwe chezvinhu zvitatu zvikuru zvekudya pazuva. Inogona kutorwa nekukasira zvisati zvaitika, panguva yekudya kana kusvika kweawa rimwe mushure mekudya. Iyo capsule inofanira kumedzwa nemvura.
Inogona here orlistat kukonzera uremu?
Yakawanda kurasikirwa uremu semhedzisiro yeOrlistat inoitika mukati memwedzi mitanhatu yekutanga yekutora mushonga. Kana iwe ukafunga kurega kushandisa Orlistat yekudzora uremu, iwe unofanirwa kuramba uchidya zvine hutano uye uchirovedza muviri nguva dzose. Nekudaro, iwe unogona kusangana nehuremu hwekuwedzera mushure meizvi.
Ungakurumidza sei kurasikirwa uremu ne orlistat?
Orlistat (zita rezita: alli) iri FDA-inogamuchirwa OTC mishonga inogona kubatsira vanhu vakawandisa uremu kurasikirwa uremu. Orlistat inoshanda nekuvhara mafuta kubva mukunyudzwa mumuviri mushure mekudyiwa panguva yekudya. Anenge mashanu kusvika gumi mapaundi anogona kurasikirwa mukati memwedzi mitanhatu yekutanga yekushandisa orlistat.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti alli atange kushanda?
Inguvai pfupi mushure mekutora alli® capsules yandinofanira kutarisira kuona mhinduro? Kana iwe ukatevera yakadzikiswa-koriori, yakaderera-mafuta chikafu, gara uchiita zvekuita zvemuviri, uye utore alli® capsules sekurairwa, iwe unogona kuona mhedzisiro mumavhiki ekutanga maviri. Yakawanda kuonda inowanzoitika mukati memwedzi mitanhatu yekutanga.
Orlistat inodzvinyirira kudya?
Orlistat (Xenical) mushonga unorayirwa naGP wako. Yakave yakagadzirirwa kubatsira kurasikirwa uremu. Zvidzidzo zvakaratidza kuti nekushandisa Orlistat, pamwechete neyakagwinya kudya uye kurovedza muviri, pane kuwedzera uremu kurasikirwa. Iyo haina kutsiva chikafu kana kurovedza muviri uye haina kudzikisira chishuwo chako.
Orlistat inoshanda here?
Zvidzidzo zvakaratidza kuti, paavhareji, orlistat, pamwe nehuremu-hwekudzikisa kudya uye kurovedza muviri, zvinokonzeresa kurasikirwa nekurema kupfuura kudya-kurema kudya uye kurovedza muviri chete Vamwe vanhu vanorasikirwa ne10% kana kupfuura yehuremu hwavo mukati memwedzi mitanhatu nerubatsiro rweorlistat. Mune mamwe, haina kunyanyo shanda.
Inogona here orlistat kukonzera pancreatitis?
Mhedziso Mishumo yedu inoratidza orlistat inogona kukonzera zvinodhaka zvakakonzerwa necancreatitis mune vamwe varwere. Kune varwere vanouya nemarwadzo emimba vachangotanga orlistat, kuongororwa kwepancreatitis kunofanirwa kutariswa. Isu tinokurudzirawo kushandisa nekuchenjera kweorlistat mune varwere vari panjodzi yekukuvara kwepancreatic.
Ndeipi nguva yakanakisa yekutora orlistat?
Orlistat inouya sekapuleti uye isina kunyorwa kapsule kutora nemuromo. Inowanzo kutorwa katatu pazuva nechikafu chega chega chine mafuta. Tora orlistat panguva yekudya kana kusvika pa1 awa mushure mekudya. Kana chikafu chikarasikirwa kana chisina mafuta, unogona kusvetuka muyero wako.
Ungarema zvakadii mumwedzi kana wakanyanya kufutisa?
Izvi zvinoreva kuti, paavhareji, izvo zvinangwa zvina kusvika pamasere mapaundi ekurema uremu pamwedzi chinangwa chine hutano. Kungoti nekuti zvinokwanisika kurasikirwa nezvakawanda, zvirinani mumwedzi yekutanga yekudya, hazvireve kuti zvine hutano kana kuti huremu hunoramba huripo munguva refu.
Nei poop orenji mafuta kana uchitora Orlistat?
Sezvo oiri iri diki pane mvura, ura uhu huchaonekwa muchimbuzi semafuta eorenji anogara pamusoro pemvura. Vamwe vanhu vanogona kurondedzera hwema hwekeriorrhea seyakasimba yemaminerari mafuta. Dzimwe nguva, munhu anogona zvakare kupfuudza tsvina kubva padivi pemafuta.
Chii chinonzi Cetilistat
Cetilistat, inozivikanwawo nemazita ezvinzvimbo Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat ndiyo itsva uremu mushonga.
Nei Tichida Cetilistat?
kufutisa ndicho chirwere chakanyanya kuwanda pasi rese. Wese munhu anogona kusaona mhedzisiro nekurovedza muviri uye nekudya kwakachena; saka zvingangoda kushandisa Cetilistat kurwisa kufutisa.
Cetilistat Inoshanda Sei?
Cetilistat inoshanda nekuvharira kuparara uye kutora kwemafuta. Inoita izvi kuburikidza nekudzivirira kwekuumbwa kwepancreatic lipase ine basa rekutyora triglycerides mumatumbu. Kamwe iyo triglycerides isingakwanise kunyudzwa semafuta acids mumuviri, ivo vanozoita kubuda.
Kubatsira kweCetilistat uye Kurema
1.Kubatsira iwe kurasikirwa uremu kuchengetedza mararamiro ane hutano, zvichikubatsira iwe mukuchengetedza hutano hwakanaka hweBMI.
2.Inopa mhedzisiro mukati menguva pfupi, Cetilistat inokupa iwo muviri webhikini mukati memavhiki gumi nemaviri.
Mashandisiro Ekushandisa Cetilistat
Kazhinji, Cetilistat powder inotengeswa muchimiro che60mg capsules ayo anotorwa nemuromo. Vamwe vanhu vanozofarira kuitora mushure menguva yekudya, asi haufanire kumbopfuura awa kana nguva yekudya.
Ko Cetilistat Inoshanda Chaizvoizvo?
Cetilistat zvakare ipfupi izwi mushonga uye inogona kunge isiri iyo yakanyanya kudzora huremu kwehupenyu hwako hwese. Kana ikashandiswa kwenguva yakareba kwazvo, zvinogona kutungamira kupindwa muropa pamwe nenyaya dzemudumbu.
Cetilistat iri, zvakadaro, inoonekwa kunge inoregererwa munzira iri nani kana ichienzaniswa nehumwe huremu hwekudhakwa zvinodhaka seOrlistat.
Ndiani Anogona kushandisa Cetilistat?
BMI yako inodarika makumi maviri neshanu, uye uri kurwara nehutano hwekufutisa-hwakadai sedzvinyiriro yeropa uye chirwere cheshuga.
Mazhinji emakona eCetilistat mativi ari gastro uye yekugaya nzira inoenderana.
Kuderedzwa muvitamin E uye D mazinga, Fecal incontinence, Defecation kukurumidza, Rectal kubuda, Fatty zvituru, Oily zvigaro ect.
Chii Chinoitika Kana Miss Dose yeCetilistat?
Kana iwe wapotsa dosi, pane zvinhu zviviri zvaunofanira kufunga nezvazvo; unonoka sei uye kana chirongwa chako chinotevera chava. Kana iwe ukayeuka kuti iwe uchangobva kupotsa dofo, tora iyo nekukurumidza sezvaunoona.
Kana purogiramu yako inotevera iri padyo zvikuru, svetuka yakarasikirwa Cetilistat danho uye wotanga yako yenguva dzose dosing chirongwa. Usambofa wakashandisa imwe dheti kugadzira iyo yakarasikirwa dofo, sezvo izvi zvichizongotungamira kune yakawandisa. Kana iwe uchinzwa kuda kuyeuka nguva yekutora yako zvinodhaka rave kuita basa, unogona kugara uchiisa alarm kana kukumbira imwe yeshamwari dzako kana nhengo yemhuri kuti ikuyeuchidze.
ndeupi mutsauko cetilistat uye orlistat？
kurapwa ne orlistat inosanganisirwa nezviitiko zvinoverengeka zvemudumbu zvakashata zviitiko (AEs) izvo zvinowedzerwa pakati pevarwere vasingateedzere kune yakakurudzirwa yakaderera-mafuta kudya. Cetilistat inhibitor yepancreatic uye gastrointestinal lipases, uye ine chemakemikari akasiyana neorlistat.